दुर्गमकी मेरी ‘आमा’ « Postpati – News For All
दुर्गमकी मेरी ‘आमा’
पसल रोकाया । दुर्गम जिल्लाकी मेरी आमा । उमेरले ५० काटिसकेकी छन् । आज पनि उकाली ओरालीमा हामीलाई पछाडि पार्दै सबै काम आफैं गर्न अगाडि तम्सिनुहुन्छ।
हामी छोरा छोरी भने रूघा खोकी लाग्दा पनि बिरामी, कतै ठोक्किए पनि बिरामी, टाउको दुखे झन् बिरामी। लगभग दैनिक जसो बिरामी भएर आमाको माया खोजिरहन्छौं।
तर आजसम्म मेरी आमा बिरामी भएर ओछ्यानमा सुतेको देखेकै छैन। कहिलेकाही आमा मामाघर जाँदा आमासँगै पछि लाग्न दिदी बहिनी झगडा गर्थ्यौं। आमा केही दिन मामा घर गएपछि हामी घरका सदस्य सबैलाई अत्यास लाग्थ्यो। म सँगै मेरा दिदीबहिनी, बा सबै आमाको बाटो हेरेर बस्थ्यौं।
आमा घर आउँदा भान्साको नुन तेलका बट्टादेखि ओछ्यान लुगा सबै अस्त ब्यस्त हुन्थे। आमा आफ्नो भारी बिसाउन नपाई घर सफा गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। आमाले पकाएको खाना आहा! कर्णालीकै डिढो र आलुकै झोल भए पनि कत्ति मिठो । आफूले पकाएको वा अरूले खान दिएको खावा खिर नै किन नहोस्, आमाले बनाएको त्यो झोलको अगाडि सबै खल्लो लाग्ने ।
एउटा नेपाली उखानको संधै याद आउँछ ‘अरूको लाख, आमाको काख’।
साच्चै हाम्रा बाजे बराजुले उखान टुक्का मिलाएरै राखेका रहेछन्। अहिले सम्झन्छु। आमाले जन्म दिने बेला कति गाह्रो भयो होला। म जन्मिदा आमाले धानबाली लाउदलाउदै जमुनाको बोटमुनी जन्मिएको थिए रे । अरु ३ जना केटाकेटी बारीमा मल बोक्दा बोक्दै, गोठमा गाइभैंसीलाई स्याहार्दा अनि जंगल घाँस लिन जादाँ बनतिरै जन्मेका थिए रे ।
उस्तै उस्तै उमेरका हामी झगडा र चकचक गर्नमा उस्तै सिपालु थियौं। हजुरबुवा र हजुरआमा दुवै बुढो हुनुहुन्थ्यो। केटाकेटी, बुढाबुढी अनि बाहिर खेतबारी, जंगलका घाँस दाउरा, गोठका गाई भैंसी, घरका लुगा धुने, खाना पकाउने, सबैलाई खुवाउने, भाँडा माझ्ने, केटाकेटी बुढाबुढी नुहाइदिने सबै काम पुरा गर्दा पनि मेरी आमाको अनुहार कहिल्यै थकित देखिनँ।
खेत रोप्दारोप्दै उहाँका पैताला र हातबाट झरेका रगतले खेतका आली सबै रंगिन्थे। हात सबै हिलाले खाएर झर्ला जस्तै देखिन्थ्यो। तर, पनि उहाँलाई फेरि भोलि बिहान खेतबारीमा काम गरेको देख्थ्यौं। त्यो केवल हामी छोराछोरी कै लागी रहेछ । हाम्रै मायाको लागि रहेछ ।
दुखको आहालमा हुर्केकी दुर्गमकी मेरी आमालाई दुखमै रम्न सिकाएको रहेछ । सायद, आज हामी संग यति ठुलो हिम्मत छैन। मानौ कि जुकाले हामीलाई टोक्यो भनेपनि चिच्याउदै आमा भनेर मुखारविन्दबाट पुकार फुत्त निक्ली हाल्छ ।
आफूमाथि दुख र पिडा बर्सिंदा आमाले अदृश्य त्यो भगवानलाई पुकार्नु हुन्छ तर त्यो निष्ठुरी भगवान आमाको सहायता दिन कहिलै आएनन । हामीलाई काँडाले कोर्दा ‘ऐया आमा’ भन्दा मलम पट्टि बोकेर मेरी आमा टुप्लुक्क आइपुग्नु हुन्थ्यो । अनि आधा रोग त्यसै सन्चो भए झैँ लाग्थ्यो ।
कति चाडबाड आए। हामीलाई चाडबाडमा नयाँ लुगा लगाउने आश जाग्थ्यो । आमाले नजिकैको खंलगा बजारमा लिएर लुंगा किन्दिए अलिकति खुसी हुन्थ्यौं, नत्र आमालाई लोभीको संज्ञा दिन्थ्यौं। तर पनि आमा कहिलै दुखि हुनुभएन । झनै माया दिनु हुन्थ्यो ।
तर, अहिले बल्ल बुझ्छु कि मेरी आमाले बजारबाट किनेर कहिल्यै एउटा टिकासम्म पनि लगाउनुभए रहेन छ । आफ्नो जवानी उमेरमा उर्बराउदा सबै इच्छाहरू दवाएर हाम्रो खुसि खोजि रहनु भयो । नयाँ लुगा लगाउँदा हाम्रो अनुहारमा आएको हाँसोले र फुरफुर हुने बानीलेनै उहाँलाई सन्तुष्ट बनाउँथ्यो।
मेरी आमाले एउटा चप्पलबाटै ५ वर्ष गुजारा गर्नुभयो। त्यो चप्पल बनाउने कम्पनीलाई पनि मानुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यही हात्तीछाप चप्पलका फिता चुडिए पनि नया रंगी बिरंगी फिताहरू फेरेर आमाले नयाँ चप्पल लगाएको महसुस गर्नुभयो। हामी भने महँगो लुगा, जुत्ता नपाएर रिसाएर खाना खान अटेर गर्थ्यौं।
चाडबाड लागेपछि बुढा बुढी भएको घर भनी आफन्तको घुइँचो उस्तै हुन्थ्यो। तर, हामीलाई भने आफू जत्रै केटा केटी आफन्तहरूले ल्याउने भएकाले चाडबाड निकै रमाइलो लाग्थ्यो। वर्ष भरिनै चाडबाड जस्तो हुने मेरो घर झन् दशैं, तीज जस्तो महान पर्वमा त बिहे घर जस्तै हुन्थ्यो। आमालाई त्यो बेला खाना पकाउँदा र भाँडा माझ्दा राति बाह्र बज्थ्यो।
घरमा आएका पाहुनाहरू कोही लट्टेमा घिउ कमी भएको भन्थे, कोही आफूलाई ढिलो खाना खान बोलाएर हेला गरेको भन्थे। तीजको बेला २५ जना जम्मा हुने मेरो घरमा घिउकै खोलो रहेछ भने पनि पुग्ने थिएन। यस्तो बेलामा त कहिलेकाहीँ हामी पनि छुट्ने गर्थ्यौं। दशैंमा बुढो मान्छेको हातबाट टिका थाप्नेको लाइन हुन्थ्यो। त्यो बेला मेरी आमाले सबैलाई मिलाएर दक्षिणा राख्नुहुन्थ्यो। त्यो सिप मेरो आमालाई कसले दियो होला भन्ने लाग्छ।
सायद यसमा उहाँले पी.एच.डी नै गरे जस्तो लाग्थ्यो। मेरो वुवा आमा औठा छाप भय पनी हामी कोहि छोरा छोरीलाई पढाईबाट वन्चित राख्नु भएन।
आमाको एउटा उखानको यादले अहिले चस्को परिरहन्छ। ‘आमाले दुध दिँदा खाइनँ, अहिले मैले अमिलो मोही पाइनँ।’ जव आमाले भैसीको दुध पिलाउन लिएर आउनु हुन्थ्यो । घुर्की लाउदै खाट मुनि लुक्थ्यौ । आमाले फकाइफुल्याई दुध पिलाउनु हुन्थ्यो ।
म र बहिनीहरु बीच आमाको काखको लागि लडाई हुन्थ्यो । आमाको काखमा बस्न नपाउदा रुवाबासी चल्थ्यो । आमाले आफ्नो काख बाँडेर भएपनि काखमा राखेर कपाल र गाला मुसारेको सम्झेर अहिले आनन्द लाग्छ।
आमा ! तपाईको जस्तो माया संसारमा अरु कसैले दिन सक्दैन । अथाह पैसाले किनेर पनि पाइदैन । आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर जन्माउने दुर्गमकी आमाको ईश्वर भन्दा महान हुनुहुन्छ । आजका सुखी छोराहरुले जन्म दिने आमाहरूलाई बृद्ध आश्रममा छोडिएर बेसहारा अलपत्र भएको देख्दा छोरा छोरी कलंक हुन ।
जन्म दिने आमालाई बाचुन्जेल आफ्नै घरमा सेवा गरेर राख्ने प्रण गरेको छु, तपाई पनि यहि कसम खानुहोस ।